कटरिना–विक्कीको बिहेमा सुरक्षा जिम्मा सलमानका बडिगार्डलाई ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
कटरिना–विक्कीको बिहेमा सुरक्षा जिम्मा सलमानका बडिगार्डलाई ? यस्तो छ कारण
भारतीय चर्चित अभिनेत्री कटरिना कैफ र अभिनेता विक्की कौशल बिहेका लागि बिहेस्थल पुगेका छन् । उनीहरु हिजो राति परिवारका साथमा राजस्थानको सवाई माधोपुरको सिक्स सेन्सेस फोर्ट पुगेका हुन् । उनीहरुको बिहीबार बिहे हुँदैछ ।
उनीहरुको बिहेका लागि बलिउड दबंग स्टार सलमान खानले सघाइरहेका छन् । कटरिनालाई बलिउडमा स्थापित गर्न सघाएका सलमानसँग उनी शुरुआतदेखि नै जोडिएकी थिइन् । अहिले सलमानले नै उनीहरुको बिहेका लागि साथ दिइरहेका छन् । विवाहस्थल सुरक्षाको जिम्मासमेत सलमानका बडिगार्ड शेराले लिएका छन् । शेराको सेक्युरिटी कम्पनी ‘टाइगर सेक्युरिटी’ मार्फत उनले जिम्मा लिएका हुन् ।
विवाहमा कडा सुरक्षा रहने छ । पहिलो सुरक्षा चेकिङ होटलभित्र छिर्ने गेटमा र दोस्रो चेकिङ हल भित्र छिर्ने गेटमा बनाइएको छ । पुलिस, निजी बाउन्सर्स र होटलका सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुनेछन् । कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गरेर अतिथिको तापक्रम पनि मापन गरिने छ ।
यस्तो छ बिहेको तालिका–
७ डिसेम्बरमा संगीत सेरेमनी, ८ डिसेम्बरमा स्थानीय समयअनुसार ११ बजे हल्दी कार्यक्रम, ८ डिसेम्बर राति आफ्टर पार्टी , ९ डिसेम्बरमा दिउँसो १ बजे सेहरा बन्दी
९ डिसेम्बर ३ बजे बिहेको मण्डपमा पुग्ने ,९ डिसेम्बर साँझ सात फेरा , ९ डिसेम्बर राति ८ः३० बजेदेखि १ बजेसम्म डिनर ।